सेक्स के हो ?गर्मीको समयमा सेक्स, कतिबेला र कतिपटक गर्ने ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो हुन्छ ।एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कारण पनि छन्, जसले तपाईंलाई विहानकै समयमा सेक्स गर्न उत्साह पैदा गर्न सक्छ । एउटा मात्र होइन, धेरै किसिमका सोध र अनुसन्धानबाट तपाईंलाई स्वस्थ राख्न विहानको समय नै सेक्सको लागि उपयुक्त रहेको पत्ता लागेको छ । सबैभन्दा उत्तम समय भनेको विहान साढे ७ बजे हो ।
सेक्स गर्नुस् मोटोपन घटाउनु:
सेक्स कतिपटक गर्ने?
फागुन १२ गते सोमबारको राशिफल यस्तो छ
आयुर्वे्दिक उपचारमा आकर्षण बढ्दै